Global Voices teny Malagasy » Zavakanto Anaty Fitateram-Bahoaka: Fantaro Ireo Mpanao Kisarisary Anaty Fitateram-Bahoaka ao Singapaoro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Marsa 2017 5:37 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tsidika, Zavakanto & Kolontsaina
Sketch nataon'i Alvin Mark Tan, nahazoana alalana
Mandray fiara, fiaran-dalamby ary voromby, tsy hoe handeha fotsiny izy ireo fa manao kisarisary ihany koa.
Herintaona mahery izao ny vondrona Facebook Commute Sketchers  no nijoro handranty ny asan'ireo artista mampiasa ny fotoanany eny am-pitaingenana fitaovam-pitaterana manararaotra manao kisarisary izay hitany ao anaty fitateram-bahoaka. Tsy ny sary voasoritsoritry ny Singapaoreana ihany no zarain'io vondrona io fa misy ihany koa ireo sary avy any amin'ny firenen-kafa.
Manazava ny antony mahatonga ny fitateram-bahoaka ho sehatra tsara indrindra ho an'ny artista hanehoany ny sanganasany i Erwin Lian, artista Singapaoreana sady mpampianatra, iray amin'ny mpanorina ny Commute Sketchers :
Mihevitra aho fa toerana milamina sy tsy manam-paharoa ny fitateram-bahoaka. Hitanao io boaty mifindra (fitateram-bahoaka) amin'ny alalan'ny kodiarana na elatra mahazaka karazan'olona maro dia maro indrindra io, satria entiny amin'ny fitodiana iraisana avokoa ny rehetra. Hitako hoe mahaliana izany, ilay tsirinkevitra miara-mandeha any ho any. Ary mampientanentana ahy ihany koa ny mahita tava maro azo atao soritsoritra ao anatin'ny efitra kely iray. Nianatra zavakanto nentim-paharazana aho ary mora ironako kokoa ny zavakanto nentin-drazana, toerana tsy manampaharoa, azo antoka ary ahitan-javatra maro ahafahako mampihatra ny zavatra tiako.
Nampiany fa ny hevitra nivoahan'ny Commute Sketchers dia aingam-panahy avy amin'ny fandaharana mitovitovy aminy avy ao Canada:
Nanome aingam-panahy ahy tokoa ny métro kanadiana. Ao amin-dry zareo ny programa ‘Manoritsoritra ny zotra’ izay anasany ireo mpanao kisaritsarim-pitaovam-pitaterana handefa ny asany ka hanasongadina izany eny amin'ny zotra. Hitako hoe mandeha ho azy izany zavatra nataony izany ary manoka-baravarana amin'ny artistam-pitateram-bahoaka amin'ny fanomezana sehatra dokambarotra ho azy ireo.
Sketch (Soritra) nataon'i Erwin Lian, nahazoana alalana
Gaga i Alvin Mark Tan, mpikambana mavitrika hafa ao amin'ny Commute Sketchers, mahita hoe toa tsy mahita izay mitranga manodidina azy akory ny olona rehefa ao anaty bus na fiaran-dalamby ry zareo :
Variana loatra amin'ny fitaovana findainy ny olona amin'ny ankapobeny ka tena tsy fantany mihitsy hoe manoritsoritra ny sarin-dry zareo anie aho ary tena tsy fantany mihitsy izay mitranga manodidina azy ireo.
Namoakatra lahatsary  fampianarana fohy manome ny antsipirian'ny soritsoritra fitaovam-pitaterana ihany koa izy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/29/97408/